भेटेरिनरी काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र डा. सुविर सिंह निर्वाचित | Vetkhabar
Home Breaking News भेटेरिनरी काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र डा. सुविर सिंह निर्वाचित
काठमाडाैं । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (भेटेरिनरी काउन्सिल) को उपाध्यक्ष पदमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र सुविर सिंह विजयी भएका छन् । परिषद्को शनिबार भएको निर्वाचनमा २ उपाध्यक्ष पदका लागि ५ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । उम्मेद्बारी दिएका मध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत नेपाल सरकारका सहसचिव डा. विमल कुमार निर्मलसमेत पराजित भएका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. एगेन्द्र श्रेष्ठ र डा. नविन उपाध्याय पराजित भएका छन् । सहसचिव डा. निर्मलले भने सरकारी सेवामा अब ६ महिना मात्रै पदावधि बाँकी रहेकाे भन्दै काउन्सिलमै रहेर अाफ्नाे अनुभव र क्षमताअनुसार पशु चिकित्सा क्षेत्रकाे सुधार गर्ने बताउँदै अाएका थिए ।
त्यस्तै, सदस्यमा डा. नरेश प्रसाद जोशी, डा. सुजन राना, डा. मनोजकुमार शाही, डा. सिजर्ना मानन्धर र डा. सुवास श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । ५ जना सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनमा १९ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए ।
विजयी हुनेहरुको सपथ ग्रहण र पदबहाली १० माघमा हुने परिषद्का रजिष्ट्रार डा. नारायण घिमिरेले भेट खबरलाई जानकारी दिए । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ को व्यवस्था अनुसार २ जना उपाध्यक्ष र ५ जना सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन भएको हो ।
सरकारको सल्लाहाकारको रुपमा रहेको काउन्सिलको हरेक ४–४ वर्षमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार परिषद्ले उक्त मितिमा निर्वाचत गरेको हो ।
काठमाडौंको आर्मी अफिसर्स क्लबमा शनिबार बिहान ९ बजेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम शुरु भएको थियो । मतदान भने दिउँसो १ बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म गरिएको थियो । अपरान्ह ४ बजेपछि सुरु भएको मतगणना राती ८ बजे सकिएको थियो । निर्वाचनमा देशका दर्तावाल पशुचिकित्सकको सहभागिता रहेको थियो ।
र, याे पनि पढ्नुहाेस् :
http://भेटेरिनरी काउन्सिलको उपाध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ?
Previous articleसुन्तला सुरक्षित गर्न दम्दालमा सेलार स्टोर
Next articleफागुनदेखि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्छौं : मन्त्री अर्याल
कोरोनाबाट पशुपन्छी औषधि व्यवसायीको मृत्यु